Ukufumana Ukwazi Yakho Inqanawe. Hayi, seriously. Ukwenza oko. – EVA: Valkyrie – Warzone
Njengokuba rookie Valkyrie pilot, kufuneka baqonde yakho inqanawe asingomsebenzi yakho zinokuphathwa misela sisithuba wheels. ke wakho wesibini imigca enqamlezeneyo. Thatha ixesha nzulu ngayo ngobunono kwaye ngokufanelekileyo ukulungiselela into lies ozayo, okanye enye into usebenzisa ke tshisa. Kwaye kwimeko EVA: Valkyrie uza mhlawumbi tshisa, ngoko ke freeze, ngoko ke kufa. Ngoko zonke nesithathu kwakhona.
Hayi eyona sikazwelonke. Ngakumbi, uyazi malunga yakho inqanawe ke instrumentation kwaye idata ngayo constantly ityisa kuwe, ngakumbi kusenokwenzeka ukuba ufuna ukuba baphile. Oku ubomi bakho inkxaso iyunithi kwaye zonke ukuba separates kwenu ukususela yingqele, unforgiving-boolean ka-nzulu isithuba. Iqulathe zonke izixhobo kwaye widgets ufuna ukwenza umsebenzi wakho njengoko a Valkyrie pilot, ngoko ke makhe thatha jonga jikelele.
Ke nkqo bar phezulu ekhohlo
Oku kubonisa ingqiqo yakho hull, okanye armor. Ke yakho yokugqibela umgca we nkqo ekukhuseleni ilungelo ngoko, ukuba le gauge efumana low, ke ixesha zinokuphathwa-futhi ke waphuma phaya uze ngaphandle, okanye umnxeba kwezinye ixabiso ukusuka inkxaso craft. Kwaye nkqo bar phezulu ilungelo yakho shield isimo. Yakho shields ingaba yakho kumgca wokuqala ka-nkqo ekukhuseleni ilungelo. Njengokuba ufunda vula entsha iinqanawa kwaye inqanawe iintlobo, uza isaziso kangakanani abo differ ngokomthetho shields kwaye armor. Okuphakathi iklasi iinqanawa, umzekelo, ingaba kulungile armored ngoko uyakwazi ukuthatha umngcipheko ehleli phaya kwaye soaking phezulu utshaba firepower. Gcina yakho iliso kwindlela yakho gauges. Oku handy abancinane hologram oninika ekhawulezayo visual unye yintoni jikelele kuwe. Blue moers ingaba friendlies, orenji moers zona iintshaba zam, etyheli moers ingaba missiles, njalo njalo. Iinjongo kwaye, crucially, iintshaba kwi-radar kubonakala njengoko hlela ukhuphelo lombhalo. ebonisa kolawulo ukuba injongo. Kanjalo ukuba i-utshaba sele ekujoliswe kuzo wena okanye ingaba kwi-ibhumbulu indawo emva kwakho, baya kuba ngaphezulu ngabemi kwi-radar. Missiles Ngalo naliphi na elinye ixesha, idabi eselunxwemeni iya kuba crisscrossed kunye amanqaku ka-missiles. Kuphela missiles kujoliswe uza kuboniswa kwi-HUD, ukuzisa clarity ukuba ikhaphethi. Friendlies ngoku kubonakala kwi-radar phantsi kweemeko ezithile. Ukuba babe thumela com ulwimi ukuba indlela ukunceda okanye iqela phezulu, uza kuyibona kwabo (ebone apha kwi-blue). Ukuba ukhe ubene flying inqanawa kunye ixabiso izakhono, zonke friendlies iya kuba ebonakalayo ngawo onke amaxesha. I-radar ngu enkulu, isixhobo, kodwa musa kuba kakhulu reliant kuyo. Emva zonke, lento VR – ngabo bonke kuthetha glance phantsi ngexesha lakho radar kanye kwisithuba ngexesha ukubona indlela uxakekile ke yokufumana phandle phaya, kodwa uza ufuna kugxila idabi esinxilisayo ngaphandle yakho cockpit kuba eyona ndawo. Kuqwalasela i-mthubi eyongezekayo iinkwenkwezi ongezantsi ekhohlo ne ekunene yakho cockpit. Ezi zimbini nokubonisa ingaba inextricably okunxulumene. I-capacitor ekhohlo ubonisa indlela kakhulu ukugcinwa amandla kufuneka, xa unyuso lwesantya isibonisi ngasekunene ibonisa njani ngokukhawuleza nawe futhi ke. Ngakumbi kuwe kukhuthaza jikelele, ngakumbi kuwe deplete i-capacitor. Kulo ukhanyiso oku, ke eyona ukusebenzisa yakho kukhuthaza ngokufutshane bursts kunokuba constantly thrusting jikelele. Eneneni, le nto leyo ingcebiso uzakufumana ukusuka experienced pilots ngenxa yokuba usebenzisa elifutshane bursts ka-kukhuthaza luhamba jikelele utshintsho ka-icala lelona kakuhle indlela staying ekhuselekile xa wasukela. Le ndawo yolawulo bonisa yakho ekhohlo uphumelele ukuba usoloko ujonge kanye kanye njenge likwenza kule umboniso, njengoko ulwazi iqulathe uza tshintsha ngokunxulumene iimeko zenu. Apha ngayo ibonisa ubume ezintathu ulawulo amanqaku, inani clones eseleyo nganye iqela, kwaye ixesha eliseleyo kwi-thelekisa. Ulawulo Amanqaku Kwi-ulawulo imifanekiso, le ndawo yolawulo kanjalo ibonisa ukuba ngaba ubume lolawulo amanqaku ukuba yakho iqela sele ukuthatha. Ukuba amanqaku ingaba mhlophe kwi-umbala, ngoko ke akukho namnye sele ulawulo. Xa drones ingaba isola, uza kubona isangqa jikelele isibonisi thatha zalisa umbala abonisa ukuba ulawulo incopho kwi inkqubo ekubeni captured. Umbala lolawulo incopho isibonisi uza tshintsha ngokupheleleyo xa ukuze incopho ngu captured, dibanisa kancinci icon iya kuvela ukubonisa apho iqela sele captured kuyo. Ukuba ujonga ngaphandle iwindow, unga khangela ukuba kukho yokudada ulawulo incopho nokubonisa ngoko ke ukuba ubona ethile ekujoliswe kuyo phantsi attack, uyakwazi ugqatso phezu kukho ukuthatha ngaphandle utshaba drone kwaye recapture kuyo. Mphathi Assault Imaphu Kulo Mphathi assault indlela, xa ulawulo amanqaku zithe secured kwaye shields ingaba phantsi, ulawulo incopho ii-uza utyibiliko ukuba buyiselwa nge onesiphumo umfanekiso mphathi. Uzaku isaziso ukuba iphawulwe ngobumhlophe amachaphaza. La ngamazwi eseleyo cooling akukho nanye – lento incredibly kuluncedo njengokuba kubhaliwe marks zabo kanye kanye ekuyo, intsingiselo akunyanzelekanga ukuba bagcine kukhangelwa jikelele ukufumana kwabo. Clone Vats okwesibhakabhaka bar ubonisa ngoku isimo sakho clone okanye i-vat, ubeke enye indlela, isixa-mali ubomi benu iqela umkile. Esi-orenji bar ingaba opposing iqela aseleyo clones. Nje apha ngezantsi oko kukuthi i-isibonisi ka-ixesha eliseleyo. Kwi-iqela ukufa thelekisa, ukuba alwe idabi iphela kwaye kufuneka abangaphantsi eseleyo clones kwe-utshaba lwenu, uza kuphulukana nayo. Ngoko ke, ukuba ezi nokubonisa ingaba ebonisa kuwe ngexesha disadvantage, ke ixesha phezulu yakho umdlalo omncinane. Mphathi Impilo Exclusive kwi-multi-umdlali Mphathi Assault indlela, oku isibonisi sele ezininzi imisebenzi, omnye nto leyo ebonisa mphathi aseleyo impilo njengoko ebone apha. Com Izilumkiso yenza ukuba ufuna ukuthumela olukhawulezayo imiyalezo kuphumla yakho iqela. Tyhiliza phantsi kwi-I-iphedi ka-ukuzisa phezulu izilumkiso menu, sebenzisa ilungelo intonga ukukhetha babuza umyalezo, ngoko ke nokukhulula I-iphedi ka-ukuthumela umyalezo. Ngokunjalo ukuva ilizwi ulwimi, uluhlu nje izilumkiso kanjalo ubonakala njengokuba umbhalo kwi ilungelo cockpit. Ngoku usondele ngakumbi abantu abaqhelekileyo neqabane lakho surroundings zonke ukuba ihlala kokwenu buckle phezulu, get yakho umdlalo ubuso kwi kwaye bonisa intlaninge yeenkwenkweziname ngubani boss
← Eyona imibuzo ukufumana Ukwazi